စမတ်ဖုန်းကြောင့် အသားအရည်ထိခိုက်ပျက်စီးလာနိုင်တယ်ဆိုတာ သင်သိရဲ့လား? – Myanmar
စမတ်ဖုန်းကြောင့် အသားအရည်ထိခိုက်ပျက်စီးလာနိုင်တယ်ဆိုတာ သင်သိရဲ့လား?
March 5, 2021 admin Life Style 0
စမတ်ဖုန်းဟာ ဘတ်တီးရီးယားတွေပျော်မြူးရာနေရာတစ်ခုလို့ပြောရင်မမှားပါဘူး။ဒီလိုစမတ်ဖုန်းတွေကြောင့် ရရှိလာမယ့်အသားအရည်ပျက်စီးမှုတွေက…
စမတ်ဖုန်းမှာကပ်ငြိနေတဲ့ဘတ်တီးရီးယားတွေက ဝက်ခြံဖြစ်စေပါတယ်။ဖုန်းကိုအိတ်ထဲထည့်မယ်။ခုံပေါ်တင်မယ်၊လက်နဲ့ကိုင်မယ်။ဖုန်းပြောမယ်။အဲ့ဒီလိုအချိန်တွေမှာ ဘတ်တီးရီးယားတွေက ဖုန်းမျက်နှာပြင်ကနေမျက်နှာပေါ်ရောက်လာတတ်ပါတယ်။မျက်နှာပြင်နဲ့ဖုန်းနဲ့ ထိတွေ့တာများလေ ဝက်ခြံဖြစ်ဖို့အလားအလာပိုများလေပါပဲ။
လေ့လာချက်တွေအရ ဖုန်းစကရင်မ်က အလင်းရောင်ဟာ အရေပြားပေါ်မှာ အစက်အပြောက်တွေ၊အမည်းစက်တွေဖြစ်လာစေတယ်လို့သိရပါတယ်။အသားအရည်က မစိုပြေတော့တဲ့အပြင် ဖြစ်လာတဲ့အစက်အပြောက်တွေကိုလည်းဖယ်ရှားဖို့မလွယ်ကူတော့ပါဘူး။အဲ့ဒါကြောင့်ဖုန်းနဲ့မျက်နှာပြင်နဲ့မထိတာအကောင်းဆုံးပါ။နားကျပ်လေးသုံးပေးမယ်ဆိုရင် ပိုပြီးကောင်းပါတယ်။
ဖုန်းဆိုတာမျိုးက heavy metal တွေနဲ့လုပ်ထားတာဖြစ်လို့ ဒီထဲမှာပါဝင်နေတဲ့ chemical တွေဟာ အရေပြားပေါ်မှာအဖုအပိန့်တွေဖြစ်လာစေပြီးယားယံလာစေပါတယ်။တစ်ခါတစ်လေ ပါးတွေယားလာတာ၊မျက်နှာတစ်ခုလုံးဟိုနေရာက ယားသလိုလို ဒီနေရာက ယားသလိုလိုဖြစ်လာတတ်တာသတိထားမိမှာပါ။ဒါကြောင့်ဖုန်းနဲ့အသားအရည်ကို တိုက်ရိုက်မထိတွေ့စေတာအကောင်းဆုံးပါပဲ။
ဖုန်းသုံးစွဲမှုမြင့်တက်လာလေ အိုမင်းရင့်ရော်မှုမြန်ဆန်လေပါပဲ။ဖုန်း၊ကွန်ပျူတာ၊တီဗီကနေထွက်လာတဲ့ အလင်းရောင်က အသားအရည်နုပျိုမှုကိုထိခိုက်စေတာပါ။Collagen ပျက်စီးမှုတွေလည်းဖြစ်လာပြီး တစ်ခြားသူတွေထက်ကို ကိုယ်က အသက်ကြီးသလိုဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်တတ်နိုင်သလောက်ဖုန်းသုံးစွဲတာကိုလျှော့ပြီး ညဘက်အိပ်တဲ့အခါမှာလည်းကိုယ်နဲ့ခပ်ဝေးဝေးမှာ ဖုန်းကိုထားထားသင့်ပါတယ်။အလင်းရောင်ကိုလည်းလျှော့ပြီးသုံးပေးသင့်ပါတယ်။
ဖုန်းကိုကြည့်တဲ့အခါ အောက်ကိုငုံ့ငုံ့ကြည့်ရတဲ့အတွက် လည်ပင်းက အကြောတွေက ခဏလေးနဲ့ညောင်းညာလာတတ်ပါတယ်။ခဏခဏဖြစ်လာတဲ့အခါ ဖုန်းကိုတောင်ငုံ့မကြည့်နိုင်တော့တဲ့အခြေအနေထိကြုံလာရနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဖုန်းကိုငုံ့ကြည့်ပြီးတဲ့အခါတိုင်း လည်ပင်းကိုအပေါ်ပြန်ပြန်မော့ပြီး လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပေးသင့်ပါတယ်။
စမတ်ဖုန်းတွေက ကောင်းကျိုးလည်းပေးသလို ဆိုးကျိုးလည်းပေးနိုင်ပါတယ်။ကိုယ့်အတွက်အန္တရာယ်မဖြစ်အောင့် ချင့်ချိန်သုံးတတ်ကြပါစေ။
မတရားအိပ်ချင်နေတဲ့ တက္ကစီဒရိုင်ဘာကြောင့် ခရီးစဉ်အဆုံးထိ ကိုယ်တိုင်ကားမောင်းခဲ့ရတဲ့ သူ့ရဲ့ဖြစ်အင်
လူအများစိတ်ဝင်စားနေကြတဲ့မော်ဒယ်မလေးနဲ့Taxi Driver လေးရဲ့အချစ်ဇာတ်လမ်းက